ဟန်ဆိုဟီးတစ်ယောက် တရားဥပဒေကို လက်တစ်လုံးကြား လုပ်လိုက်နိုင်လေသလား?? | News Bar Myanmar
ဟန်ဆိုဟီးတစ်ယောက် တရားဥပဒေကို လက်တစ်လုံးကြား လုပ်လိုက်နိုင်လေသလား??
Idol Trainee တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟန်ဆိုဟီးဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က “ဒရပ်” အသုံးပြုတယ်ဆိုပြီး ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာပါ။ သို့ပင်မဲ့ ထိုကဲ့သို့ စောင်ကြည့်စဉ် ကာလအတွင်းမှာပဲ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့က နာက်ထပ်တစ်ကြိမ် ” ဒရပ် ” အသုံးပြုခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ထောင်နန်းစံရတော့မယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
စောင်ကြည့်ရေးငှါနကတော့ တရားရုံးကို အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟန်ဆိုဟီးအား ထောင်ဒဏ်ဖြင့်အရေးယူပေးရန် လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဇူလိုင် ၂၉ရက်နေ့က တရားရုံးကလည်း ဟန်ဆိုဟီးကို သီးသန့်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်စဉ် ဟန်ဆိုဟီးက သူမဆေးမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဆီးစစ်ချက်အဖြေကလည်း မှားနေတာလို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက် တရားရုံးက နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဟန်ဆိုဟီးဟာ “ဒရပ်” အသုံးမပြုဘူးဆိုတဲ့ အဖြေထွက် လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပဲ တရားရုံးက ဟန်ဆိုဟီးကို ထောင်ကျမည့် အပြစ်ဒဏ်ကနေ ချက်ချင်းကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဆိုဟီးကိုလည်း ချက်ချင်းလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တခုစဉ်းစာစရာက ရှောင်တခွင် စစ်ဆေးစဉ်တုန်းက positive အဖြေထွက်ခဲ့ပြီးကာမှ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်စစ်တဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့် Negative အဖြေထွက်သွားရတာလဲ။
တရားဥပဒေကိုများ လက်တစ်လုံးခြား လုပ်လိုက်ကြသလား?? လူထုကတော့ ဟန်ဆိုဟီး ထောင်မကျတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အတော်လေး ပေါက်ကွဲနေကြပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဒီကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။ အမြင်လေးတွေ မျှဝေခဲ့ကြပါဦး။
Next ဆိုးဟွန်းကို ရိုက်ကူးနေဆဲ ဇာတ်လမ်းတွဲမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန် ပရိတ်သတ်များတောင်းဆို »
Previous « U.S နဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားက Kpop ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ရွေရောင်နေ့ရက်တွေဖြစ်လာမယ့် August လ
Tzuyu လေးရဲ့ သဘာဝအလှတရားဟာ ဘယ်လောက်တောင်သတင်းမွှေးနေသလဲဆိုတော့…
ငယ်စဥ်ကဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းအနုပညာရှင် (၄) ဦး